၁၇၈၀ အစောပိုင်းမှ စတင်၍ ပညာရှင်များနှင့် အပျော်တမ်းလေ့လာသူများအားလုံး နှစ်လုံးတွဲကြယ်များကြား အကွာအဝေးထောင့်ကို တယ်လီစကုပ်များအသုံးပြု၍ တိုင်းတာကာ နှိုင်းရ လည်ပတ်နှုံန်းကို တွက်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အကယ်၍ နှိုင်းရ လည်ပတ်နှုံန်းသည် မျဉ်းကွေးဖြစ်လျှင်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန် ကြယ်သွားလမ်းကြောင်းမှ သွေဖည်၍သွားသည်ကိုလည်းကောင်း တိုင်းတာ တွေ့ရှိ့ပါက ၎င်းကြယ်နှစ်လုံးကို ကြယ်စုံတွဲ binary star ဟုခေါ်သည်။ ဤသို့မဟုတ်သော နှစ်လုံးတွဲကြယ်များမှာ ထင်မြင်ကြယ်တွဲများသာ ဖြစ်သည်။ များစွာသောကြယ်များအား ဤနည်းဖြင့်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ နှစ်လုံးထက်ပိုသော ကြယ်အတွဲများ၏ သွားလာလှည့်ပတ်ပုံမှာ သာမန်ကြယ်စုံတွဲများထက် များစွာပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။.
ခုနစ်စင်ကြယ်အတွင်းရှိ မီဆာကြယ်(Mizar, in Ursa Major)ကို နှစ်လုံးတွဲကြယ်ဖြစ်ကြေင်း Benedetto Castelli and Galileo တို့မှ ပထမဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိ့ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ရောဗတ် ဟွတ် မှ အခြားနှစ်လုံးတွဲ ကြယ်များကို ခြာဖွေတွေ့ရှိ့ခဲ့သည်။ ၎င်းတွေ့ရှိမူများ နောက်တွင်တော့ ညကောင်းကင်၏ နှစ်လုံးတွဲ ကြယ်များကို ဆက်တိုက်ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ မြောက်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင် အလင်းအား ၉ထက်ပိုသော ကြယ်များအားလေ့လာခဲ့ရာ ၁၈ လုံးတွင် ကြယ်တစ်လုံးမှာ နှစ်လုံးတွဲ ကြယ် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိ့ရသည်။ ope.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နှစ်လုံးတွဲ_ကြယ်&oldid=703975" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။